Mpifanila vodirindrina tsara hanamboarana, hanitatra ny lakozia-lakozia an-dakozia, Faucets famenoana pot, efi-fidiovana
Home / Interior design / Mpifanila vodirindrina tsara hanarenana, manitatra lakozia
2020 / 09 / 27 FisokajianaInterior design 6014 0
Mpifanila vodirindrina tsara hanamboarana, hampivelatra lakozia
Vehivavy mpifindra-monina no misakafo atoandro atoandro ao amin'ny Good Neighbor Settlement Home any Brownsville. (Ryan Henry / The Brownsville Herald)
Ny fizarazarana mihombo, mitombo, miantsena amin'ny lafaoro vaovao, mikraoba ary latabatra fanomanana amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny asa ao amin'ny Home Good Settlement Home rehefa nahazo tombony $ 175,000 tamin'ny alàlan'ny Valley Baptist Legacy Basis izay afaka manampy amin'ny fanitarana sy famosaviana ny lakozian'izy ireo.
Hugo Zurita, talen'ny governemanta tao amin'ny Good Neighbor Settlement Home, dia nilaza fa be dia be ny vola fanampiana satria tsy nisy nanovana ny lakozia ary tsy mitazona trano ampy hanana latabatra fikarakarana sy paoma isan-karazany mampatsiahy ny fatana izay mety hahamora kokoa azy. hanompo safidy salama kokoa ho an'ny vondrona.
"Nanatona azy ireo izahay ary nampiasa azy io ho valin'ny fandaharanay sakafo dia ny vavonin'ny vondrona misy anay, izany no nahafantarana anay nanolotra sakafo maraina, atoandro ary sakafo hariva ho an'ny vondrona eto Brownsville," hoy izy.
"Ny lakozianay dia kely dia kely, tsy ho lehibe indrindra ary tsy mety aminay hanana fahaizana manao sakafo lehibe kokoa ary manomana sakafo hariva fanampiny, noho izany ny fananana laharana iray izay niasa tamin'io fotoana io dia tena sarotra ho antsika hanana ilay fahaizana mamahana olona betsaka. Ny isantsika dia avo roa heny tamin'ny alàlan'ny fandaharam-pihinananay nandritra ny areti-mandringana, noho izany dia nahazo aina izahay fa afaka nahazo izany vola izany. ”
Nilaza i Zurita fa ny drafitra dia ny fananana fahaizana manampy bebe kokoa ny vondrona amin'ny filan'izy ireo. Ny fanavaozana aza dia hanitatra ny fanitarana ny pantry an-dakozia, hahafahan'ny Mpifanila vodirindrina Tsara handray fanomezana fanampiny ary handamina azy ireo hiditra haingana.
"Ny drafitra dia ny fananana fahaizana manampy bebe kokoa amin'ny vondrona misy anay ka tsy manana lafaoro isika, koa ankehitriny izahay dia afaka mividy lafaoro mba hanana fahaizana manendasa ary hanao izay hahasalama kely fotsiny," voalaza. "Manao sakafo maraina, atoandro ary sakafo hariva izahay, ka misy fotoana anaovanay sakafo maraina dia izao handaminana sakafo antoandro ary rehefa avy misakafo antoandro izahay izao handamina sakafo hariva, tsy manana ilay trano mihitsy izahay."
Nanampy i Zurita fa ny trano fonenana dia nahazo fanampiana avy amin'ny Clinic Day and Night time Clinic ary nanangona $ 11,000 nandritra ny Giving Talata tamin'ity taona ity, vola izay azo ampiasaina amin'ny fanamboarana lakozia. Good Neighbor dia manompo mponina 500 eo ho eo isan-kerinandro.
“Tonga eto izahay hanampy, tsy manontany izahay hoe maninona no mahazo ireo orinasa ianareo, mpiara-monina tsara izahay ka manandrana ho mpifanila vodirindrina amin'ny vondrona ary izany no misy anay ary eto izahay hanampy an'izay maniry ny fanampiantsika, ”hoy izy nanonona.
Previous :: Nanonona £ 4,000 i Neny mba hamerenana amin'ny laoniny ny trano fidiovany toa reraka dia nanao izany ho an'ny 45 pounds Next: Ny faucet amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mahomby indrindra: paompy hanatsarana ny karazana efitrano fandraisam-bahininao